Shabaqa jebin, inta badan in ka badan in ay tahay in ay oo wax laga xumaado, laakiin waxay sameeyaan. Haddii ay ahayd oo kaliya qalad ama haddii butterfingers si fudud ay qoyska, markii shaashadda waajibka ku ah inay jebin, waa ka baxaa. Haddii si kastaba ha ahaatee, waxaad tahay aficionado casriga ah ama aad leedahay injineer qarsoon gudaha in uu ahaa mid u doonaysa inay kala qaado oo iPhone, tani waa fursad aad. Iyadoo screen dayactirka DIY kharash yar, qabanayaan mid sidoo kale ka dhigan tahay in aad iPhone waxa uu kula karo mar kasta iyo in xogta gaarka kuu ah waxa uu noqon doonaa ammaan ah waqtiyada oo dhan. Sidaas darted, haddii aad ku talajirto in qabanayaan bedelka screen iPhone DIY, halkan waxaa ah xoogaa aaraa dhib in aad u baahan tahay in la xusuusto.
Hadda waxaad ayaa ka fiirsaneysa inay sameeyaan bedelka screen iPhone aad iskaa, halkan waa waxa aad u baahan tahay inaad samayso. Dib u fadhiiso oo neef badan ku qaadato. Si fiican uga fikir, iyo naftaada u falanqeeyaan. Eeg haddii aad samir in ay qaadanayso in la bedelo shaashad iPhone jabay ama dhaawac. Sidoo kale, ka fiirso in aad dabcigiisa tahay geedi socod iPhone ka bedelka screen u baahan yahay in qofka joogo is dajiyaan inta ay socoto.
Ma ahan in aan markii taas loo sameeyo
Ma doonaysaa in ay sameeyaan bedelka screen iPhone laakiin aanad haysan waqti? Waa hagaag, ma dhihi karno in habka aanu u baahan yihiin cadad Jashiisu yahay waqti. Haddii aad kor loogu qaaday oo aad u mashquulsan joogtada ah, ka fiirsan sameeyo screen bedelka iPhone ku weekend ah si aad haysato waqti ku filan. Mar kale, waxaan kaliya oo aan ku adkaysato kartaa oo ku filan in inkastoo habka of bedelay iPhone ee shaashadda ma aha mid aad u adag waxa aanu u baahan yihiin waqti iyo dulqaad.
Maxaa dhacaya haddii kor ayaan ku soo wada baabbi'innay aan telefoonka?
Tani waa waxa ugu muhiimsan si ay u eegaan haddii aad ku talajirto in qabanayaan bedelka screen DIY iPhone. Sida horay loo sheegay, oo keliya runtii waxaad naftaada u qeexi kara. , Sidaas sidaa sameeyaan iyo falanqeey naftaada xukumi. Haddii aad u malaynayso in aad la'aan waayo-aragnimo farsamo samaxaynin in geeddi-socodka, caawimaad ka saaxiib ama qaba qaar ka mid ah waayo-aragnimo ah oo ku saabsan arrinta qaado. Haddii aad isku aragto awoodi sameeyo bedelka Si kastaba ha ahaatee, ha ka yeelanina fursad oo ay deyso qorshaha ugu dhaqso badan si aad u hesho qaar ka mid ah gargaar xirfadeed aad iPhone.
Halkee si ay u bilaabaan?
Ku bilow Yeelashada aqoonta ugu badan ee aad awoodo. Waxay noqon kartaa mid ka mid ka buug, ka video ah oo aad kaliya ku turunturoodeen korkiisa internet-ka ama raadinta Google ah. Ka dhig baadi ku saabsan dhibaatada dhow dahay ilaa aad si kalsooni leh u qaban kartaa su'aalaha aad u aasaasi ah oo ku saabsan habka iPhone bedelka shaashadda. Faa'iido ah aqoon yahay aad u muhiim ah sidii ay u la'aan, waxaa jira fursad aad u ordo galay shil misfortunate inta ay socoto.
Meesha laga helo screen cusub ka?
Guuritaanka ku saabsan in habka bedelka screen iPhone laftiisa, shaashadda waxaa laga iibsan karaa tiro ka mid ah meelaha. Waxaa jira tiro balaadhan oo ah iPhone screens bedelka laga heli karaa internetka ama dukaamada qalabka maxaliga ah ee tayada kala duwan oo kala duwan oo safafka qiimaha. Maskaxda ku hay in screen raqiis u badan tahay in ay jebiyaan marka la barbar dhigo sarkaal Apple soo saaray screen bedelka. Sidaa darteed, iyadoo miisaaniyada ku hay, iibsan shaashad in loo hubiyo in aadan u baahan tahay in aad in ay dhex maraan habka dhan screen iPhone bedelka mustaqbalka dhow ka dhigi doonaa.
Maxaa qalab ayaan u baahanahay?
Si aad u samayn bedelka screen DIY iPhone ah waxaad u baahan doontaa:
1. A Phillips # 000 kaashawiito
Kaashawiito 2. Pentalobe iPhone
4. spudger A
5. bamka nuugid A shaashada kor u
6. qalab A caagga ah si crack shaashadda furan
Hadda, aad si fudud u samayn karaa raadinta Google iyo waxaad ka heli doontaa in ay jiraan tiro ka mid ah xirmooyin DIY heli karo oo dhan qalabka. Xirmooyinka Kuwani waa la awoodi karo, wuuna idin badbaadin halista ah ee iibsashada qalab u gaar ah oo loo dhiibi karaa in aad gaadhay.
Screen waxaa si daalay, waxaan ka qaadan kartaa oo kaliya ilaa xubnihii
Haddii shaashadda aad iPhone waxaa daalay burburi yar yar oo aad kaliya ma qaadi karaan mar isticmaalaya bamka nuugid ah, isku day inaad iyaga si gaar ah u qaadeen. Taas aawadeed aad u waxaad isticmaali kartaa walxihii ah. Layliska daryeelka aad u badan iyo taxadar sida in aan kor u xubnihii xoog weyn. Waxaad dhab ahaan ma doonayo in aan baabbi'in guddiga macquulka ah ee hadda, aad samayn?
Ayaa laga yaabaa in aan laga badiyay fur ama laba
Ha sasin. Booqo dukaamada qalabka deegaanka ama dukaan kasta oo bixiya dayactirka iPhone. Waxay badan kuwa ay leeyihiin.
Shirkii ugu sareeya kaliya ma iman lahaa
In DIY ah, waxa guud ahaan lagu taliyaa in aad ka tagto shirka ugu sareeya sida uu yahay. Marka la eego nooca jilicsan ee sticker copper iyo xaqiiqda ah in koolo waa halkii xoog, kaliya iska ilaaliyaan galay hawshooday oo dhan lug leh ka helida shirkii ugu sareeya off buuggan.
Screen cusub ma noqon doono!
Waxaa jiri kara qaar ka mid ah sababaha taas. Mid ka mid ah oo laga yaabo in aad si fudud u soo iibsaday shaashad khaldan. Sidaas, sii deji oo taga si aad garaash iPhone deegaanka. Waxay leeyihiin in ay sidaas daraaddeed dhibaatooyin sida kuwan oo ku salaysan maalin walba qaban, waxay leeyihiin sahayda badan oo ka mid ah screens dheeraad ah. Sidoo kale, haddii ay ahayd oo kaliya ay sabab u tahay qalad muujiyey aad by inta ay socoto iPhone ka bedelka screen, ay awood u yeelan doonaan si uu u xaliyo in aad.
Marka la eego nooca ka mid ah dhibaatooyinka in qof laga yaabo in ay la kulmaan inta ay socoto ah bedelka iPhone DIY, waxaa iska cad in habka ma aha mid aad u adag. Inkastoo, xalka ugu wanaagsan waa in had iyo jeer la tasho daryeelka macaamiisha Apple hore ka dibna waxay sahamiyaan fursadaha kale.
8 Songs Halloween Terrifyingly Cool dhagixii Halloween xisbiga Your
Sidee si ay u gudbiyaan iyo gurmad wada hadal iPhone SMS Message iMessage in PC ama Mac
> Resource > iPhone > iPhone Screen Bedelaadda Dhibaatooyinka